Pep Guardiola oo galaya Todobaadkii ugu Adkaa ee Manchester City iyo Kooxaha uu Wajahayo | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Pep Guardiola oo galaya Todobaadkii ugu Adkaa ee Manchester City iyo Kooxaha...
Pep Guardiola oo galaya Todobaadkii ugu Adkaa ee Manchester City iyo Kooxaha uu Wajahayo
Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa waajahaysa toddobaadkii ugu adkaa oo lagu tilmaamay midka sawirka ka bixin doona sida uu noqon doono xilli ciyaareedkeedu.
Man City ayaa galaysa toddobaad cidhiidh ah iyo kulamo adag oo ay jeclaan lahayd in waqtiyo loo dhaxaysiiyo, kuwaas oo horyaalka Premier League iyo Champions League iskugu qaybsan.
Tababare Pep Guardiola oo kooxdiisu ay kulankii ugu dambeeyey ee horyaalka barbarro goolal la’aan ah soo gashay, isla markaana shan dhibcood lumisay shantii kulan ee ay ciyaartay, ayaa waxay waajahaysaa kooxaha uu xafiiltanku ka dhexeeyo ee Chelsea iyo Liverpool oo horyaalka Premier League ay ku dagaallami doonaan, waxaana u raacaysa oo labadan ciyaarood u dhaxaynaysa Paris Saint-Germain oo ay Champions League ku kulmi doonaan.
Chelsea vs Man City: Sabti, September 25
Sabtida ayay Man City safar ku tegaysaa magaalada London iyadoo Stamford Bridge kula soo ciyaari doonta Chelsea, waana ciyaar lagu xasuusanayo finalkii Champions League ee xilli ciyaareedkii hore. Guardiola waxa ciyaartan dhaawacyo kaga maqan Oleksandr Zinchenko, halka uu shaki ku jiro taam ahaanshaha Ilkay Gundogan iyo Rodri.
PSG vs Man City: Salaasa, September 28
Marka ay Man City kala dhamaadaan Chelsea, waxay isku diyaarin doontaa safar kale oo ay ku sugayso magaalada Paris oo ay marti ugu noqon doonto kooxda sida weyn isku dhistay ee PSG oo ay semi-finalkii Champions League ee xilli ciyaareedkii hore kusoo garaaceen. PSG waxay hadda haysataa Lionel Messi, Donnarumma, Ramos, Wijnaldum, Achraf Hakimi iyo xiddigo kale, mana aha middii uu Pep Guardiola kaga badiyey semi-finalkii Champions League
Liverpool vs Man City: Axad, October 3
Safar kale ayay geli doontaa Man City marka ay kasoo laabato Paris, waxaanay garoonka Anfield ugu tegi doonaa Liverpool oo uu hormood u yahay Jurgen Klopp, kuwaas oo hadda ah hoggaamiyeyaasha horyaalka Premier League, iyagoo isku mid ah Chelsea.
Virgil van Dijk ayaa soo laabtay oo difaaca dhexe u taagan Liverpool, waxaanay xiddigaha Man City dhibaato kala kulmi doonaan sidii ay u gaadhi lahaayeen goolka Reds.
Si kastaba, toddobaadkan ka bilaabmaya Sabtida ee kusoo dhamaanaya Axadda usbuuca xiga ayaa qaabayn kara sida uu noqonayo mustaqbalka Man City ee xilli ciyaareedkan, waxaanay u baahan yihiin inay guulo keenaan, haddii se laga badiyo, gaar ahaan labada kulan ee horyaalka, waxay geli doonaan xaalad xun.
Previous articleWakiilka Xidiga Asensio oo Shaaca ka qaaday in Xidiga uu ka tagayo Kooxda Real Madrid
Next articleArteta oo ka Hadlay Kulanka Arsenal ee ka hortageyso Kooxda Tottenham